अनिँदो भई... - मनोरञ्जन - नेपाल
नवीन के भट्टराई | तस्बिरहरु : भास्वर ओझा
नवीन के भट्टराईको पछिल्लो चर्चित गीतमध्ये पर्छ, ‘यदि मैले गिटार नसमाएको भए ।’ आजसम्मको उनको सदाबहार संगीत उचाइ हेर्दा लाग्छ, यदि उनले जीवन्त शब्दहरु नछानेको भए ! अनि यदि उनले राम्रो मेलोडी नपछ्याएको भए !
सामान्य शब्दैले काम चलाउन लागेको भए पनि उनका आवाजले सरदर आयु पाइहाल्थे होलान् । तर, दुई दशकअघि सुरु नवीन यात्रा अनवरत चल्नुमा शब्द, संगीतप्रति उनको छनोटले पनि काम गरेको देखिन्छ । सहरिया युवाले सुन्ने भनिँदै आएको पप म्युजिकलाई लोकप्रिय बनाउन उनको भूमिका अब्बल छ । यिनै स्टार गायकको नयाँ गीत आएको छ, ‘ अनिँदो भई...’ । शब्द र संगीत दुवै गायककै ।
अचेल डिजिटल रेकर्डिङ चल्तीमा छ । ट्रयाक बनायो, गायो । स्थायी लाइन कपीपेस्ट गर्‍यो । उस्तै परे स्वर पनि कम्प्युटरबाट मिलायो । तर, ‘अनिँदो भई...’ लाइभ रेकर्डिङ गरिएको हो । अर्थात्, हरेक वाद्यवादन एकसाथ बजाएर नवीनले गाए, सिंगल टेकमा । भन्छन्, “लाइभ गाउँदाको मज्जै बेग्लै हुन्छ ।”
‘आँखामा तिमीलाई...’ पछि लाइभ रेकर्डिङ गरिएको नवीनको दोस्रो गीत हो यो । पेनड्राइभमा ट्रयाक हालेर स्वदेशका महोत्सवदेखि विदेशका कन्सर्टसम्म दौडने चलन छ । यो दौडमा नवीन पर्दैनन् । ब्यान्डबेगर उनको कन्सर्ट हुन्न । भन्छन्, “ट्रयाकमा गाउँदा निरस र कृत्रिम हुन्छ । न मेरो चित्त बुझ्छ, न त दर्शकको । त्यसैले थोरै होस्, तर लाइभ ब्यान्डसँगै मात्र गाउने गर्छु ।”
सयौँ सांगीतिक प्रस्तुति दिइसके । दर्जनौँ गीत रेकर्ड गरे । तैपनि, हरेक दिन साधना गर्छन् । अझ कन्सर्टका लागि त घनघोर अभ्यास नै गर्छन्, ब्यान्डसँगै । मानौँ, उनी पहिलो कन्सर्टको तयारी गर्दैछन् । परिणाम, हरेक सोमा दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध पार्छन् । नयाँ एल्बम ननिकालेको तीन वर्ष बित्यो । यद्यपि, केही महिनाको अन्तरालमा नयाँ गीत युट्युबबाट सार्वजनिक गरिरहन्छन् । न उनलाई धेरै गीत निकाल्ने लोभ छ, न त ट्रयाक बोक्दै देश–विदेश दौडने हतारो नै ।
डलर खर्चेर भ्युज कमाउन नसकिने होइन । र, पनि युट्युबको भ्युजका आधारमा कलाकारको लोकप्रियता मापन गरिन्छ । कतिपय त एउटै गीतबाट देशदेशावर चहार्छन् । भलै तीमध्ये अधिकांश साउने भेलजस्तै सुकिहाल्छन् पनि । तर, नवीनको गति उस्तै छ । न कहिल्यै उर्लिएर आउँछन्, न त कहिल्यै हराउँछन् । हिट होइन, स्तरीय संगीत उनको रोजाइ हो । जुन सुन्दा ‘आहा !’ लागोस् । श्रोताको मानसपटलमा सुनौलो संसार निर्माण होस् । उनको बुझाइमा गीतमा त्यो तागत हुनैपर्छ । यस्तै गीत सिर्जनामा तल्लीन हुन्छन् । कारण, संगीत नवीनका लागि सोख होइन, साधना हो । भन्छन्, “संगीतलाई सोख मान्ने र प्रचारमा रमाउँलान् । मेरो लागि साधना हो । त्यसैले संगीतमा जीवन खोज्छु ।”
ट्याग: संगीतसंगीतकार पपसंगीत